Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Philmụaka Nat Phillips Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Ihe omuma anyi nke Nat Phillips na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ibi ndu, ndu onwe onye na uru ya.
Na nkenke, anyị na-egosipụta akụkọ ndụ nke ọkachamara nke ndị egwuregwu bọọlụ sitere na North West England. Anyị na-amalite akụkọ a site n'oge ọ bụ nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu ahụ na Liverpool.
Iji mee ka akụkọ banyere onwe gị na-atọ gị ụtọ na ọdịdị nke Nat Phillips Bio, lee nwa ya mgbe ọ bụ okenye. Na-enweghị ajụjụ, ọ na-akọ akụkọ egwuregwu football ya dị ịtụnanya.
Akụkọ banyere Nathaniel Phillips. Hụ ndụ nwata ya na Ọganiihu Akụkọ.
Anyị niile maara na ọ bụ ezigbo ndị na-agba ọsọ nke na-egwuri egwu maka Liverpool na Liverpool. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ maara akụkọ ndụ ya. Anyị akwadebela ya, na-enweghị ịmalite ọzọ, na-amalite ịmalite.
Nat Phillips Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido Biography, ezigbo aha ya bụ Nathaniel na Nat bụ naanị aha otutu. Nathaniel Harry Phillips mụrụ na 21st ụbọchị Machị 1997 nye nne ya, Anna Phillips na nna, James Neil Phillips na Bolton, England.
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ bekee bịara n'ụwa dịka nwa nke abụọ, n'ime ụmụaka anọ (Thea, Billy, Nat na Saskia) amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya na-ese onyinyo ebe a.
Nat toro na-akwado Bolton Wanderers nke bụ ebe ọ bịara. Ọ na-enwe mmasị iso nna ya na-egwu bọl na ubi ezinụlọ ya na ahụmịhe mbụ ya na-ele egwuregwu ahụ bụ na Rebook stadium (afọ 5). Dịka nwatakịrị, Nat ghọrọ chi atọ, nna ya, Jay Jay Okocha na Ronaldinho. Nke a bụ otu ihe akaebe nke vidiyo.
Onye na-agbachitere England nọrọ n'oge ọ bụ nwata na nwanne nwanyị okenye bụ Thea Phillips, nwanne nwoke nke okenye, Billy Phillips na nwanne nwanyị nke obere Saskia Rose. Nat nwere nnukwu mmekọrịta nwanne na nwata ya na ndị ikwu ya.
N'oge ahụ, ọ nweghị ezigbo enyi karịa inwe nwanne nwoke dịka Billy gburugburu. Dika ozo, enweghi ezigbo ndi enyi karia inwe umu nne ya ndi mara nma - Thea na Saskia Rose n’akuku ya.
Nat Phillips Ezigbo Ezinụlọ:
Center-back na-esi n'aka ezinụlọ egwuregwu na-enwe akụkọ ntụrụndụ bara ụba na football. You maara?… Nat bụ nwa nke onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ Bolton na onye na-agbachitere, Jimmy Phillips.
Nwa amaala Bolton si n'ezinụlọ ndị ego bọọlụ na - arụ - site na papa m bara ọgaranya. O si n’otu ezinụlọ nwere otu n’ime ezigbo ụlọ na-arụ ụlọ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ dịghị akpa akụkọ akụ na ụba na aha ya. N'ihi ya, ndị ịgba ọsọ ụkwụ na-esite na ezinụlọ dị n'etiti etiti.
Anyị nwere ebe a, foto nke Nna Nathaniel Phillips - James Neil Phillips - na oge ochie ya. Nat na-ese n'elu site n'aka nna ya. Anyị na-ahụ nwanne ya nwanyị nke okenye bụ Thea Phillips dịkwa n'ihu papa m mgbe Billy Phillips nọ n'akụkụ ha, dịkwa ka mascot. Nke a bụ vidiyo na-ekwu maka ikike ndị Nathaniel nwere na inwe nna bọọlụ Bolton.
Nat Phillips Ezinụlọ:
Onye na-agbachitere ahụ si Bolton, bụ nnukwu obodo dị na Greater Manchester, North West England. Obodo a bu akuko nke Lancashire na omenaala ma o di nkeji iri ato na otu site na obodo Manchester. Bolton bụ ụlọ eji arụ ọrụ akwa na England.
Maapụ a na-akọwa Nat Phillips Origin.
Nathaniel Phillips sitere na agbụrụ White-British nke mejupụtara 79% nke ndị Demography nke Greater Manchester.
Nat Phillips Mmụta:
Kpọmkwem na 6th nke July 2013, Nat nwere ụlọ akwụkwọ sekọndrị a na Saskia Rose, nwanne ya nwanyị. Ọ gwara ndị Fans na ọ bụ ya bụ pre prom eserese. Site na nke a, ọ gafere usoro agụmakwụkwọ bụ isi na sekọndrị - ikekwe na Bolton.
Nat Phillips Pre-Prom foto ya na nwanne ya nwanyị nke nta, Saskia Rose Phillips. Nke a gosiri na ọ gara ụlọ akwụkwọ.
Nat Phillips Football Akụkọ:
O mere atụmatụ ịgbaso nzọụkwụ Nna ya kemgbe ọ bụ nwata. Ọ na-esiri papa ya, Jimmy Phillips ike obibi ezumike nká site na football na 2000. Mgbe ọ kwụgidere akpụkpọ ụkwụ ya, papa Nat mere ihe kachasị mma iji hụ ka otu n'ime ụmụ ya na-anọgide na-ebi nrọ ezinụlọ.
N'afọ ahụ 2000, na nkwadebe maka ọrụ Nat, Jimmy Phillips sonyeere ndị ọrụ nchịkwa ndị ntorobịa Bolton Wanderers n'agbanyeghị na ọ ka bụ onye egwuregwu maka otu. N'ihi ndu ya, Nat hụrụ egwuregwu ahụ n'anya mgbe ọ dị obere. Ya na papa ya dị ka onye nchịkwa ntorobịa, ọ dịịrị ya mfe ịga ule na Bolton Wanderers Academy.
Nat Phillips Early Life na Bolton.
Little Nat malitere dị ka igbe igbe na-igbe ma bụrụ otu n'ime ndị kacha nta na otu ya. N'ihi obere ogo ya, e kwere ka ọ kpọọ n'ọnọdụ dị iche iche. Ọ ghọrọ naanị etiti ka ọ na - etolite - ka afọ ole na ole gachara. Nke a bụ vidiyo banyere ọnọdụ egwu ya n'oge ọ bụ nwata na Bolton.
Onye na-eto eto enweela mmeri site na nwata. I meriri iko nke mbu ya na ndi otu ozo o gwuru. Otu onye ọzọ zụrụ - ọ bụghị papa ya. Lifebogger nwere naanị vidio vidio banyere Nat nke mbụ egwuregwu bọọlụ - nke o meriri dịka nwatakịrị.
N'okpuru nkuzi nna ya, Nat nwere ọganihu ngwa ngwa site na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Jimmy Phillips nọgidere dị ka onye nkụzi agụmakwụkwọ Bolton n'oge nwa ya nwoke na ngalaba ndị ntorobịa Bolton. N'enyeghi aka, o kpaliri nwa ya nwoke ike. Nke a hụrụ ka ọ gụsịrị akwụkwọ nke ọma na ntorobịa ntorobịa n'afọ 2016.
N'okpuru nlekọta nke Papa ya, Nwa anyị nwoke ghọrọ nnukwu ọfụma.
Ndụ mbido na Senior Football - United States na-efu:
Tupu ngụsị akwụkwọ nke ndị ntorobịa a, Phillips mụtara akụkọ ahụ na-adịghị mma. Na ya na ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Bolton agaghị enye ha ọrụ nkwekọrịta. Ihe kpatara ya bụ na klọb ahụ, n'oge ahụ, nwere nkwarụ n'ụzọ ego.
Mgbe nne nna ya bụ Nathaniel Phillips nọrọ n'okpuru nku nna ya n'oge ọ bụ nwata, nne na nna Nathaniel Phillips hụrụ mkpa ọ dị ka nwa ha nwoke gaa ọdịnihu ya dị anya site n'ụlọ. Ọ dịpụrụ adịpụ England - United States.
E nyere Nat ohere agụmakwụkwọ ka ọ gwuo na United States, kpomkwem na Mahadum North Carolina's ndị otu egwuregwu bọọlụ. Eziokwu bụ, ọ nweela akwụkwọ ụgbọ elu nke ọma wee bụrụ njem maka USA, n'amaghị na ọ gaghị eme.
Mgbe Bolton Wanderers dara ada inye ndị na-agba bọọlụ ntorobịa nkwekọrịta, ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-etinye aka site na izu ọtụtụ ndị egwuregwu ha. N'oge Nathaniel na-eme atụmatụ ịga njem na USA, otu onye scout aha ya bụ Andy O'Brien ewereworị aha ya na Liverpool.
Ndi Liverpool nke di na north England scout nwere ezi ihe nlele site na klọb ya onye degara ezinulo Nathaniel Phillips akwukwo ozi na-ekwusi ike ka nwa ha nwoke bia maka ihe a kpoa ngwa-ngwa-ndokwa ikpe" na ikekwe, agadi nkwekọrịta. Dị ka chi ga-enweta ya, Nat gabigara ọnwụnwa ahụ mana njem ya gaa USA ka nọ n'ọrụ.
Oge Mbido Liverpool:
You maara? Daybọchị Nathaniel Phillips tinyere akwụkwọ, akwụkwọ nkwekọrịta mbụ ya na Liverpool, ọ ga-aga Charlotte (USA). N'ụbọchị ahụ, ọ na-emechu ihu na Mahadum North Carolina Soccer nke chere ya ka ọ bịanye aka na agụmakwụkwọ bọọlụ afọ anọ. Na-ekwu okwu na Liverpool ECHO, Nat kwuru otu oge;
“M debanyere aha na Liverpool ụbọchị m ga-efepụ. Enwere m mgbagwoju anya, ebe akụkụ abụọ ahụ achọghị ka m nwee nkụda mmụọ.
Ọ bụ ụbọchị nzuzu mana enweghị m ike iche ụzọ ka mma iji nweta LIVERPOOL. Ahọrọ m ha ma leghara ndị nke ọzọ anya. ”
Nat Phillips Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Na-abịa site na Bolton iji mee aha ya na otu n'ime ụlọ asọmpi kachasị asọmpi na England adịghị mfe. Na-ekpe ikpe site na nzụlite ya, nwa amaala Bolton kwadebere onwe ya - dịrị njikere ịlụ ọgụ nke iguzobe onwe ya na ọkwa U23 nke Liverpool. Althougt were obere oge, Phillip chọtara ala ya ma gbanwee ya na gburugburu ebe ọhụụ ya na ọkwa bọọlụ dị elu.
Oge egwuregwu atọ nke egwuregwu egwuregwu hụrụ Phillips ka ọ ghara ịkwado nsogbu ọ bụla. O zutere olile anya kachasị elu nke oge a na-agbasie ike, na-eme ihe ike na isi. Nat kpebisiri ike na ọ ga - abụ onye isi ndị otu ya ma dị njikere maka bọọlụ otu.
The Hard First Team and Activating Options:
N'oge ọkọchị nke 2018, Jurgen Klopp kpọrọ Phillips ka ọ soro ndị otu egwuregwu Liverpool na-azụ ọzụzụ. N'ihi obi ike o nwere n'ọzụzụ, ọ ghọrọ onye bonafide so na ndị otu klọb ahụ mechara nweta ndị ọhụrụ dịka Curtis Jones.
Agbanyeghị n'ihi nnukwu asọmpi, ọ bịara siere Nat ike ịmasị ihe ndị na-amasị nnukwu etiti azụ - Joel Matip na nke Croatia Dejan Lovren. Nat Phillips mere ememe mmeri na 2019 UEFA Champions League Final MA abụghị akụkụ nke ndị otu meriri ya.
VfB Stuttgart Akụkọ:
Na 2019, Nat - na-achọ inweta egwuregwu bọọlụ oge niile - weere mbinye ego na ọkwa nke abụọ nke Germany. O nwere oge ịga nke ọma na VfB Stuttgart - na-ekpughere ya egwuregwu bọọlụ nke mbụ.
Nnyocha na mkpebi siri ike Nat Phillips - nke nyeere ndị otu ya aka idobe ọtụtụ akwụkwọ ọcha - ghọrọ akụ ya kacha baa uru.
Onye na-agbago England Defender ghọrọ anụ ọhịa na VfB Stuttgart.
Nwa amaala Bolton mụtara ọtụtụ ihe site na ndị egwuregwu Stuttgart nwere ahụmahụ - dị ka Holger Badstuber na Mario Gomez. Vidio dị n'okpuru ebe a na-egosi otú Nat dị umeala n'obi-dị ka o kwuru banyere mkparịta ụka ya na Mario Gomez.
nwee ndidi ka ọ na-eche ohere ya maka ncheta Liverpool zuru oke. Na 27 Disemba 2019, ndị Reds chetara ya na mbinye ego naanị maka klọb iji zipu ya ụbọchị 12 ka e mesịrị. Nke ahụ egbochighị ya ka ọ kwenyere oge ọzọ iji gosipụta na ọ ga-abịa ọzọ.
Nat Phillips Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Bịaru nso n'etiti oge 2020/2021, Jurgen Klopp malitere withnessing ya ihe karịrị nro. Nsogbu mmerụ ahụ ji egwu Liverpool ya na aha ndị otu mbụ - dị ka nke Virgil van Dijk na Joe Gomez niile pụọ.
Site na mmerụ ahụ na ndị ọrụ ibe ya, Nat Phillip ghọrọ onye Liverpool nwere olile anya na nchekwa.
Jurgen Klopp nọ na-achọ ihe ọ bụla nwere ike inye ọhụụ maka olile anya ya. Na-eleba anya na akụ ya, aha na-ewu ewu - Phillips pụtara. N'ikwu ya n'ụzọ doro anya, ọ malitere icheta mgbazinye ego VfB Stuttgart nke abụọ. Onye nchịkwa German tinyere olileanya niile na nwata ahụ n'akụkụ Mee Williams na midfield gbanwee -Fabinho.
Na 31 Ọktoba 2020, Phillips mere Premier League mbụ ya, na-enyere ndị otu ya aka inweta mmeri 2-1 na West Ham United. Footkwụ ụkwụ isii na 6 sentimita asatọ n'akụkụ aka ọhụrụ - Ozan Kabak - weghaara akara ngosi ahia nke ahia na usoro nke na-eweta njedebe oge nchekwa ha.
Nat nwere àgwà nke azụ azụ zuru oke.
Nat gosiputara ndi Liverpool ndi ozo otu o di n'igwe. Site na usoro nke masterclass tackles na ịmara ihe na-agbachitere, ọ gosipụtara onye ọ bụla na ọ nweghị ike ịdaba na ọrụ ọhụrụ ya.
Liverpool na-esote ihe ukwu:
Ka m na-ede Nathaniel Phillips 'Biography, ụwa ugbu a na-ahụ ya dị ka onye ịma aka kwesịrị ekwesị maka nhọrọ nhọrọ otu Liverpool na mbụ. Ọbụna Jurgen Klopp nwere obi ụtọ na otu onye nzọ ụkwụ ụkwụ ya tụkwasịrị obi siri nwee ike igwu mmiri mgbe a tụbara ya na Premier League miri.
Hụ onye ghọrọ ezigbo ezigbo enyi Jurgen Klopp. Ha abụọ dị mma ọnụ, ọbụghị ya?
Big like his master, brilliant, smart, intelligent and everything,… Nat represents one of the success stories of Liverpool Post-COVID era. No wonder Klopp called him “Mounster na Ikuku“. Nke a bụ ihe ngosi vidiyo.
Site na ndị na-achọ ịlụ onwe ha na-achọ ịrịọ arịrịọ na ego maka mbinye aka ya, ọ ga-abụ nnukwu ọ joyụ nye ezinụlọ Nat, ọ bụrụ na ọ kpọọ England. Ọfọn, naanị oge ga-agwa. Ndị ọzọ dị ka anyị na-ekwu na Bio a, bụ akụkọ ihe mere eme.
Nat Phillips hụrụ ndụ n'anya:
Ndị ọ bụla ama ama ji ụkwụ kwụọ ụgwọ ya na Anfield kwesịrị WAG mara mma. Maka Nat, enwere enyi nwanyị nke sitere na ihe ọ na-egosi, zuuru obi ya. Nwa ya-ọdịdị ya na ọdịdị ya (nke zuru oke maka Nat!) Ga-abụrịrị n'etiti ihe kpatara ya, gịnị kpatara o ji kwenye na ya na-agbanwe ịbụ nwunye ya.
Lee, Nat Phillips Nwanyị nwanyị. O nwere ima nma nke uwa na WAG zuru oke ka o gbazee obi ya.
Onye na-agbachitere England n'ọdịnihu na-enwe ịkekọrịta foto dị egwu nke ndụ ịhụnanya ya site na Instagram. Anyị nwere foto ebe Nat Phillips gosipụtara na ọ dị jụụ iso ya na enyi ya nwanyị na-enwe ezumike. Ọ dị ka ha abụọ a na-enwe ọmarịcha njegharị nlegharị anya na ụfọdụ ebe amaala nka kacha mma nke ụwa.
Mgbe oge na-adighi nma na Nat. Ọ na-akpọrọ enyi ya nwanyị gaa ebe mara mma mara mma n’ụwa.
Nat Phillips Ndụ nke Onwe:
N'ebe a, anyị ga - enyere gị aka ịza ajụjụ a - Onye bụ Nat Phillips n'èzí football? Mata ụdị onye centreback ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Nat Phillips Ndụ Nke Onwe-KWURU !!
Ihe izizi, ndi n’egwuregwu bekee bụ ndị ghọtara obere ihe nke ndụ. Nat nwere ikike ịgbanwe echiche ha ka ọ bụrụ omume doro anya na ọ na-egosi mgbe niile na ọ ga-aga nwoke ọzọ iji mezuo ebumnuche ya.
Natana Phillips Lifestye:
Agaghị akọwapụta ụzọ ndụ ndị na-agba ọsọ site na igosi ụgbọala ndị mara mma, ụlọ (ụlọ) na Swagger. Lifebogger na-egosi vidio a na-egosiputa akụkọ na-ewute n'azụ ụgbọ mbụ nke Nat Phillip.
Ya na enyi ya nwanyị, Nat na-eji ego bọọlụ ya na ụwa na-eme mgbe niile, na-ahụ ọdịdị dị ka o kwere mee. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị maara na ọ na-akwụ ụgwọ ọrụ ya na njem ezumike.
Agbachitere na-emefu ego ya na-eme ihe ziri ezi - VACATION !!
Nat Phillips Ndụ Ezinụlọ:
Onye na-agbachitere 6 ụkwụ si n'ụlọ ebe enwere mmekọrịta n'etiti ibe ya. Dika edere ya na foto di n'okpuru, enwere ezi ndu ezinulo. Onye ọ bụla nọ n’etiti ụlọ ya na ibe ya na-anọkọ ma na-anọkọ ọnụ na-emekọ ihe ọnụ.
Kedu otu ezinụlọ Nat Phillips dị n'otu sitere.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị nne na nna Nat Phillips na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ; umunne na umunna.
Banyere papa Nat Phillips:
James Neil Phillips mụrụ na 8th nke February 1966, n'obodo ya nke Bolton. Nna Nat Phillips bụbu onye egwuregwu bọọlụ na-egwuri egwu maka Bolton, Rangers na Middlesbrough. N'afọ 2001, ọ lara ezumike nká na Bolton mgbe ngụkọta nke egwuregwu 572 na ihe mgbaru ọsọ 19. N'okpuru ebe a bụ ihe ngosi nke Nat Phillips Papa duirng ụbọchị egwu ya.
Lee Nat Phillips Papa n'oge ezigbo ụbọchị ya.
Mgbe ezumike nká, papa Nathaniel Phillips were ọrụ dị ka onye njikwa Bolton Wanderers Reserves. O mechara gbagoo onye isi ụlọ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ ebe ọ nọrọ ọtụtụ afọ dịka onye nchịkwa ndị ntorobịa. N'etiti ụmụ ya, ọ kụziiri Nat na ịgbaso nzọụkwụ ya.
Nke nta nke nta ọ na-eme obere Nat ka ọ bụrụ ndị egwuregwu bọọlụ. Ma nna ma nwa nwoke nọ nso.
Banyere Nat Phillips nne:
Anyị na-ahụ Anna Phillips ebe a ka ya na nwa ya nwoke bọọlụ nọ na-ekpori ndụ oge dị oke ọnụ na ugwu Nikki Beach nke Ibiza. Ọ bụ nne Nathaniel Phillips, nwanyị a na-ahụta dịka otu n'ime ndị kacha mma ụlọ n'ụlọ na Bolton obodo England.
Nate Phillips n'akụkụ nne ya - Anna - na Nikki Beach nke Ibiza.
Philmụnne Nat Phillips:
Ndị ọgba bọọlụ Liverpool nwere nwanne nwoke (Billy) na ụmụnne nwanyị abụọ aha ya bụ Thea na Saskia Rose Phillips. Ha niile tolitere na Bolton ma nọrọ nso na otu ọzọ kemgbe ha bụ ụmụaka.
Banyere Billy Phillips:
Dabere na profaịlụ ya na Instagram, nwanne nwoke nwoke okenye nke Nat Phillips na-arụ ọrụ maka E. & J. Nnukwu osisi. Companylọ ọrụ a nwere ndekọ dị ka onye na-ebuputa mmanya California buru ibu na mmanya kachasị ezinụlọ nwere na United States.
Nke a bụ Billy Phillips profaịlụ na IG. Ọ na-egosi na ọ na-arụ ọrụ maka E&J Galo Winery.
Billy n'adịghị ka Nat agbasaghị ụzọ nke ịghọ ndị nrịba ama. Gị na papa ya (Jimmy) na-ekere òkè n'ịchịkwa ọrụ nwanne ya nwoke. A na-ahụ Billy ebe a n'akụkụ Nat na-aga mwepụta akwụkwọ.
Nat Phillips ya na nwanne ya nwoke Billy n’agha akwukwo.
Banyere ụmụ nwanyị Nat Phillips:
See hụrụ ụmụ agbọghọ abụọ a,… ha niile toro. Nke dị n’aka ekpe bụ Saskia Phillips. Ọ bụ nwanne nwanyị nke ntà Nathaniel Phillips na onye ikpeazụ a mụrụ n'ezinụlọ. A na-etinye Thea Phillips n'akụkụ aka nri. Ọ bụ nwanne nwanyị nke okenye na nwa nke abụọ nke ezinụlọ.
Thea na Saskia bụ ihe niile toro eto. Lee ka ụmụnne nwanyị Nat Phillips si maa mma.
Ndị na - agba ọsọ na - eso ụmụnne ya nwanyị nọ nso ka ọ na - akpọrọ ha, ya na ndị ezinụlọ ha maka ezumike.
Eziokwu Nat Phillips:
N'akụkụ ikpeazu nke Ncheta anyị, Lifebogger na-agwa gị eziokwu ndị ọzọ gbasara etiti etiti onye bụ England n'ọdịnihu.
Eziokwu # 1 - Ọ bụ Onyenchekwaebumnobi Liverpool na Ngbanwe:
Football bụ otu n'ime egwuregwu ndị a na-atụghị anya ya na ọtụtụ ntụgharị na ntụgharị. Gaghị ama ihe ga-eme ọzọ. N'ihi nke a, Nat sooro nzọụkwụ nke Rio Ferdinand, John O'Shea, Dani Alves na John Terry n'ọzụzụ dị ka onye na-eche nche.
Ọ ga-emeli ka ebum n’obi ya?
Nat na-amụta nkà nke ịchekwa ihe ka o wee nwee ike ichebe ihe mgbaru ọsọ mgbe ọ na-akpọ oku. Gị anaghị adịkarị eme, anyị ahụla ihe omume nke ịbụ onye ezigara onye na-eche nche otu ya na onye si n'ọhịa ga-arụ ọrụ nchekwa. Ì chere na ọ ga-eme ihe ọjọọ dị ka Harry Kane mgbe akpọrọ?
Ndị a niile anatala oku oku.
Eziokwu # 2 - N'ịtụle ụgwọ ọnwa ya na Nkezi Citizen:
AKW SKWỌ AKWALKWỌ AKW LKWỌ (£)
Kwa Afọ: £ 3,696,000
Ọnwa kwa: £ 308,000
Kwa Izu: £ 70,000
Kwa :bọchị: £ 10,000
Kwa elekere: £ 417
Nkeji nkeji: £ 7
Sekọnd: £ 0.11
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Nat Phillips 'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Liverpool.
You maara?… Onye nkịtị na Liverpool na-enweta 84,800 GBP kwa afọ ga-arụ ọrụ maka afọ 43 iji mee Nat Phillips ụgwọ ọnwa na Liverpool.
Eziokwu # 3 - Nat Phillips Net Worth:
Bido na agadi ọrụ ebe ọ bụ na 2019 na-egosi afọ abụọ nke ahụmịhe - 2021 stats. Site na ụgwọ ọrụ nke 3,696,000 ugbu a kwa afọ, Anyị na-eme atụmatụ Nat Phillips net ruru ihe ruru £ 2 nde.
Eziokwu # 4 - A Dog n'anya:
Ndị egwuregwu bọọlụ, gụnyere ọtụtụ n’ime anyị, hụrụ anụ ụlọ ha n’anya na Nat Phillips abụghị otu. O nwere Nkịta aha ya bụ Flo Phillips onye ọ hụrụ n'anya n'obi ya. Nke a bụ vidiyo nke Nat na Nkịta ya - onye ọ na-ewere dị ka nwa ya.
Eziokwu # 5 - Nat Phillips Profaịlụ (FIFA):
N’enweghị ajụjụ ọ bụla, o kwesiri ka emewanye ya na ikike ya. Nat ejiriwo aka ya rụọ ọrụ na Anfield, ọ dịghịkwa nso n'akụkụ elu ya. Ọ dị mma dị ka Ben Godfrey ya mere kwesiri inwe ikike nke 84 (ma ọ bụ karịa) na mkpokọta 80.
Ihe omuma banyere Nat Phillips, onye na-agbacha agbacha agbacha agbacha na-akuziri anyi na Ndidi abughi ikike ichere, kama otu anyi si eche ezigbo agwa mgbe anyi na echere. Mgbe ọ na-echere ka ọ nwee ohere Liverpool, Nat mere ihe niile iji hụ na ọ dị njikere mgbe oge ruru.
Phillips abụghị nwa na-eto eto na 23 afọ (nyocha 2021). Ileba anya na Life Life Story na-egosi na o kwesịrị ohere na ọnọdụ Reds n'etiti azụ. Cheta, ọ hapụrụ ka ọ bụrụ onye egwuregwu bọọlụ nke US niile na aha ịchụ nrọ na Anfield.
LifeBogger na-ekwu okwu banyere nne na nna Nat Phillips ọkachasị papa ya maka inye ya ntọala ọrụ Bolton na efere ọla edo. Fashionlọ ejiji ochie na-achọzi ohere ịmalite ọrụ ya na Liverpool. Anyị nwere olile anya na oku England ya na nke kachasị mkpa, ka ya na Virgil van Dijk soro dị ka akụkụ nke nhọrọ ndị otu mbụ.
Na Lifebogger, anyị na-eche maka izi ezi nke Bio anyị Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee. Jiri olu ọma gwa anyị okwu ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na akụkọ anyị banyere Nat Phillips. Maka nchịkọta ngwa ngwa nke Memoir ya, jiri tebụl Wiki anyị n'okpuru.
Aha zuru ezu: Nathaniel Harry Phillips
aha otutu: Nat
Age: 24 afọ na ọnwa 4.
Ụbọchị ọmụmụ: Daybọchị 21st nke Machị, 1997.
Ebe amụrụ onye: Bolton, Ukwuu Manchester.
Ndị nne na nna: James Neil Phillips (Nna) na Anna Phillips (Nne)
Ọrụ Nna: Onye bụbu onye na-agba bọọlụ, onye nkuzi na onye njikwa nwa.
Ụmụnne: Billy Phillips (Nwanna Okenye), Thea Phillips (Nwanne Nwanyị) na Saskia Rose Phillips (Nwanyị Nwanyị)
Ihe akara Zodiac: Aries
elu: 1.90 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 3 sentimita asatọ
Egwuregwu Ọnọdụ: Ndabere na azu